UAirbnb.org - Yenza okuthile
Nika abantu indawo abaza kuyibiza njengekhaya ngexesha lengxaki.
Buka iindwendwe kwindawo.
Ngexesha longxamiseko, unganceda engingqini yakho ngokunika abantu abasengxakini indawo yokuhlala, kuquka iimbacu zaseAfghanistan.
Qalisa ukubuka iindwendwe
Abantu oza kubanceda
Indawo yakho inokuthuthuzela intsapho efuduke ngenxa yomlilo wehlathi, imbacu ethatha uhambo lokusindisa ubomi, umntu onceda ngexesha lentlekele ofika xa kusandula ukuqala inkanyamba.
Funda amabali eendawo zokuhlala
“Sasiyazi ukuba abantu abenza imisebenzi ephambili babesesichengeni kwiindawo abasebenza kuzo. Saba nalo mbono wokuba singenza njani ukuze sincede nangakumbi?”
UErika, Umbuki Zindwendwe kuAirbnb.org wabasebenzi abatshotsha phambili
“Iqela lokunceda ekuhlaleni lwakwaCORE, sonke siyancedisana ngenxa yamabali ethu amangalisayo nendlela esikuthanda ngayo ukunceda ingingqi yethu.”
UCrista, osebenzisana noAirbnb.org kumbutho ongenzi nzuzo iCORE
“Indlu yam yayibonakala ngathi ilahliwe, yayingathi akho mntu uhlalayo kuyo. Ngoku le ndlu intle ibe ikhuseleke ngakumbi. Nabammelwane bam bafumana uncedo (kweminye imibutho). Ndivakalelwa kukuba le ntsikelelo yafumaneka kwingingqi yonke.”
UCarmen, undwendwe leAirbnb.org ePuerto Rico
“Ndibulela kakhulu kuba siye sanethuba lokuziva ngathi siyancedisa ekwenzeni izinto zibe ngcono. Ibilixesha elinzima—ubufuna ukuba nento oyenzayo kodwa ube ungazazi ukuba ungenza ntoni.”
UJustin, Umbuki Zindwendwe wakwaAirbnb.org ePortland, eOregon, eMerika
Indlela yokuya kuhlala
Indlela yokuqalisa ukwamkela iindwendwe
Ukulungele ukuvula iakhawunti? Siza kukukhokela kwindlela yokwenza indlu yakho uze wabelane ngayo neendwendwe. Ukuze uqale, uza kudinga nje indawo etofotofo neentsuku ezimbalwa zokufumaneka.
Iindwendwe ziyahlolwa zize zivunywe
Sihlola zonke iindwendwe ukuze siqinisekise ukuba ziyafaneleka ukubhukisha indawo yokuhlala zisebenzisa inkqubo yethu, ibe ziyayifikelela imigangatho yoludwe lwezinto ezimele ukuba ziyazenza zokuqinisekisa zika-Airbnb. Uza kukwazi ukubuza imibuzo uze uncokole nabo nabaphi na abantu abanokuba zindwendwe kuyo yonke inkqubo yokubhukisha.
Uza kukwazi ukufumana uncedo olufumaneka imini nobusuku kuyo yonke inkqubo yokubhukisha. Ukwakhuselwe Nasisiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo, esibonelela nge$1 000 000 yeedola zaseMerika yokubhatalela umonakalo kwindlu.
Unemibuzo ngokwamkela iindwendwe?
Nikela kwiindawo zokuhlala.
Izigidi zabantu kwihlabathi jikelele zigxothwa kwiindawo zazo ngenxa yezidubedube neentlekele. Iminikelo inceda ibhatalele iindleko zeendawo zokuhlala zokwexeshana.
Wonke umnikelo wakho unceda abantu abasengxakini.
Asizibhatalisi zonke iimali zeenkonzo, ngoko zonke iidola onikela ngazo zinceda abantu bafumane iindawo zokuhlala xa bezidinga kakhulu. Umnikelo wakho unokunceda intsapho yembacu ifumane indawo yokuhlala xa iqala ukufika okanye umntu onceda ngexesha lentlekele aphumle emva kosuku olude.
“Ndifike kweli lizwe ndiyimbacu ibe ndiza kuzama konke okusemandleni am ukunceda ngendlela nam endincedwe ngayo.”
UAime, umntu onikelayo eDavie, eFlorida, eMerika
“Ndiye ndancedisa ekuphuhlisweni nasekuncedeni kwiindawo zasekuhlaleni iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu. Ndikuthanda kakhulu ukunceda abanye abantu ngeendlela ezibonakalayo neziqhubekayo. ”
UMichael, umntu onikelayo ePhiladelphia, ePennsylvania, eMerika
“Ndiye ndanenyhweba yokukwazi ukubuka iindwendwe ukuze ndenze ingeniso engakumbi; ndinombulelo ibe ndiyathemba ndiza kukwazi ukunceda omnye umntu odinga ukuncedwa.”
UChristie, umntu onikelayo eNashville, eTennessee, eMerika
“Ukubuka iindwendwe yinto endiyithanda kakhulu ibe ukuba ndingakwazi ukunceda umntu endingamaziyo azive esekhaya, ndiyakuvuyela ukunceda.”
UMercy, umntu onikelayo eDallas, eTexas, eMerika
Indlela umnikelo wakho osebenza ngayo
UAirbnb naye uyanikela
Sineqela leengcali zemibutho engenzi ngeniso neleteknoloji elisebenza nzima ukuze landise ifuthe lethu. UAirbnb ubhatala zonke iindleko zokwenza le nto, ibe uye wanikezela ngezabelo eziyi-400 000 ukuze abhatalele lo msebenzi.
Yonke imali emele ibhatalwe yokuthumela imali ayizukutsalwa
Asikhe sizisikele, ngoko yonke imali onikela ngayo inceda abantu bafumane indawo yokuhlala ngelona xesha bayifuna kakhulu ngalo.
Imali onikele ngayo ingafakwa kwiindleko kwingxelo yerhafu
Iminikelo yakho ungayifaka njengeendleko kwingxelo yerhafu kangangoko uvuma umthetho waseMerika. Uza kufumana irisithi yerhafu ukuze uncedakale ukwazi ukugcina ingxelo yemali etsaliweyo.
Iimpendulo zemibuzo yakho.
Yiya Kwiziko Loncedo
Dibana nababuki zindwendwe kunye neendwendwe zethu.
Funda amabali abo
Buka iindwendwe kwindawo
Uncedo lokubuka iindwendwe
© 2021 Airbnb.org. Imvume yeyethu